Sokafy famandrihana ho an'ny iMac | 24-inch vaovao Avy amin'ny mac aho
Misokatra ny famandrihana ho an'ny iMac vaovao 24-inch
Tonga ny fotoana andrasana, Vao nanokatra famandrihana ho an'ny iMac 24-inch vaovao i Apple minitra vitsy lasa izay. Mpampiasa maro no niandry ity fotoana ity hitehirizana ny iMac vaovao azy amin'ny loko irina, miaraka amin'ny endri-javatra mahavariana sy ny puce M1 vaovao.
Avy amin'i Apple dia mazava izy ireo fa ny ampahany amin'ny fahombiazan'ny iMac dia mifandray amin'ny endrika ihany koa noho izany amin'ity kinova vaovao ity dia nitandrina tsara izy ireo ary nandefa iMac tena tsara. Raha ny filazan'izy ireo ny fanandramana ireo loko ary amin'ity tranga ity iMacs dia azo fidina amin'ny loko maitso, mavokely, volondavenona, manga, volomboasary, volomparasy na mavo.
Resy lahatra izahay fa ho avo ny tahiry an'ireo iMac vaovao ireo ary nisy ny faniriana hanova ny volavolan'ny Apple-in-one iray an'ny Apple. Fotoana fanaterana vinavinaina ho tonga amin'ny 21 Mey izy ireo na andro aoriana fa efa eo ny daty.
Marihina fa amin'ireo maodely fito lehibe dia tsy misy afa-tsy loko efatra, ny ambiny miloko dia natokana ho an'ireo maodely valo fototra. Izany hoe ireo mpampiasa izay maniry ny fidirana iMac dia tsy maintsy misafidy ny maitso, mavokely, volondavenona na manga. Izahay dia tsy mieritreritra izany fa fanakantsakanana fa azon'izy ireo natolotra ny safidy hisafidy ny maodely tianao indrindra na dia ny maodely fidirana aza. Aza adino koa izany ireo solosaina ireo dia tsy misy afa-tsy port USB C misy roa sy ilay jack 3,5mm.
Efa nitahiry ny iMac vaovaonao ve ianao? Zarao amin'ny fanamarihana ny zavatra niainanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » Misokatra ny famandrihana ho an'ny iMac vaovao 24-inch
Ny lalàna fanitarana fiantohana vaovao dia misy fiantraikany betsaka amin'ny Apple (sy ny sisa).